“Aad baan ugu faraxsanahay shaqadeyda cuno karinta, laakiin waxaan ka jeclaan lahaa inaan dalkii ku laabto oo aan tababare noqdo.’ – Xiddigii xulka qaranka Soomaaliya Muxyadiin Cambar + Daawo – Gool FM
“Aad baan ugu faraxsanahay shaqadeyda cuno karinta, laakiin waxaan ka jeclaan lahaa inaan dalkii ku laabto oo aan tababare noqdo.’ – Xiddigii xulka qaranka Soomaaliya Muxyadiin Cambar + Daawo
(Nairobi) 30 Juunyo 2016 – Halyeyga xulka qaranka Soomaaliya Muxyadiin Cambar Qamiis, waxaa uu haatan ku sugan yahay magaalada Nairobi ee Waddanka Kenya, halkaas oo uu ku yahay cuno kariye.
Waxa uu Muxyadiin Cambar Qamiis ka tirsanaa kooxdii xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee la oran jiray Waxool.
Muxyadiin Cambar Qamiis waxa uu sheegay in xulka qaranka Soomaaliya uu ku matalay ama kala soo ciyaaray dalal badan oo ay ka mid yihiin, Burundi, Zambia, Egypt, Saudi Arabia, Morocco iyo dalal kaloo badan.
Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay Muxyadiin Cambar in ciyaartii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnayd ay ahayd kulankii Somalia iyo Saudi Arabia, taasoo uu sheegay halyeygu in Soomaaliya ay aad uga ciyaar fiicnayd Sucuudiga, marka xiddigaha xulka Soomaaliya ay dalka ku soo laabtaanna si wacan loo soo dhaweyn jiray oo xaflado loo sameyn jiray, isla markaana abaal-marino lagu dhiiri gelinayo la guddoonsiin jiray.
Barburkii markii uu dhacay kaddib waxa uu Muxyadiin Cambar Qamiis sheegay inuu yeeshay xirfadda cuno karinta.
“Maarkii uu burburku dhacay kaddib xirfaddaan ayaan yeeshay, intii la tuugsan lahaa ama lagugu sheekeynsan lahaa waa inuu qofku shaqeysto oo xirfad iyo xeelad la soo baxo, xirfadaan cuno karin ayaa aniga ii noqotay nolol, caruur ayaan ka korsadaa, waan ku faraxsanahay dadkeyguna waa igu darajeeyaan.” ayuu yiri halyeygii qaranka Soomaaliya ee Muxyadiin Cambar Qamiis.
Waxaana uu hadalkiisa daba dhigay: “Dadku waxa ay igu qiimeeyaan inaan cunto macaanahay iyo in aan ahay halyeey qaran.”
“Aad baan ugu faraxsanahay shaqadeyda cuno karinta, laakiin waxaan ka jeclaan lahaa inaan dalkii ku laabto oo aan tobabare noqdo oo xirfadeyda kubadda cagta uga faa’iideeyo ubadka Soomaaliyeed, korna u qaado isboortiga Soomaaliya.”
HALKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA QIIRADA LEH:-
Muuqaalka waxaan ka soo xiganay: Dalsoor
“Waxaa la joogaa waqtigii aan adduunka ogeysiin lahaa in bar-dhammaadkeyga xiga ay tahay Man United.”. Zlatan Ibrahimovic oo warkiisa caddeystay
James Rodriguez oo ku soo biiray xiddigaha kubadda cagta ee TIMAHA caddeystay + SAWIRRO